जसले अपेक्षा भन्दा उच्च प्रदर्शन गरिरहेका छन् ! | Hamro Khelkud
जसले अपेक्षा भन्दा उच्च प्रदर्शन गरिरहेका छन् !
लन्डन (एजेन्सी)– विश्व फुटबलमा त्यस्ता धेरै शीर्ष खेलाडी छन्, जसको खेल जीवन सोचे अनुरुप अघि बढ्न सकेन । सुरुवातका वर्षमा केही राम्रो गरेर बढी अपेक्षा गरिएपनि विस्तारै ओरालो लागेको फुटबलमा थ्रुपै उदाहरण छन् । तर, विश्व फुटबलमै त्यस्ता केही फुटबल खेलाडी छन् । जसको खेल जीवन ओरालो लागिएको अनुमान गरिएपनि पछिल्ला केहि समययता उनीहरुले खेल जीवनमा उच्च प्रदर्शन गरिरहेका छन् । त्यस्ता चार खेलाडी जसले यो सिजन उच्च प्रदर्शन गरे ।
४. थोमस भेरमालेन
आर्सनलका पूर्व कप्तान समेत रहेका भेरमालेन बार्सिलोनमा भने खासै मौका पाएनन् । उनलाई धेरैले फ्लप स्टारका रुपमा चित्रण गरे । उनी टोलीको सेन्ट्रल ब्याकमा पनि चौथो रोजाइका खेलाडी थिए ।
सामुयल उम्टिटी र जाभियर मास्केरानो चोट ग्रस्त हुँदा भेरमालेनले मौका पाएका थिए । जहाँ उनले प्रभावित पार्ने मौका पाए । एल क्लासिकोमा उच्च प्रदर्शन गरेपछि उनले बार्सिलोनामा अन्ततः नियमति मौका पाउन थालेका छन् ।
३. ज्याक विल्सेरे
लोनमा बोर्नमाउथमा रहँदा गोलिगाँठामा गम्भिर चोट बोकेपछि विल्सेरेको आर्सनलमा भविष्य टुंगिएको अनुमान थियो । तर, २६ वर्षे उनीले सफल पुनरागमन गर्दै आर्सनलमा स्थान बनाउन सफल भए ।
अहिले नियमित रुपमा टोलीमा पर्दै उनले पुरानै खेलाडीका रुपमा आफुलाई प्रस्तुत गर्न सफल भएका छन् । यी मिडफिल्डरले इङ्ल्यान्ड टोलीमा पनि पुनरामगन गरेका छन् ।
म्यानचेस्टर युनाइटेडमा योङको खेल जीवन विस्तारै ओझेलमा पर्दै गएको धेरेको अनुमान थियो । लेफ्ट ब्याकको नयाँ भूमिकामा पनि उनीले आफुलाई स्थापित गराउने प्रयास गरेका छन् ।
३२ वर्षे उनीले यो सिजन उच्च प्रदर्शनका साथ टोलीलाई महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाध गरिरहेका छन् । वास्तविक स्थान भन्दा अर्को ठाँउबाट खेल्दा पनि प्रभाव जोड्न सफल भएका उनीले टोलीलाई योगदा गरिरहेका छन् ।
म्यानचेस्टर युनाइटेडमा १३ वर्ष बिताएर एभर्टन फर्केका इङ्ल्यान्डका पूर्व कप्तान रुनीबाट धेरै ठूलो अपेक्षा राखिएको थिएन । तर, उनले धेरैको अनुमान भन्दा विपरित सिजनमा उच्च प्रदर्शन गर्ने क्रममा सबै खाले प्रतियोगितामा गरि ११ गोल गरिसकेका छन् ।
कतिपयले उनले विगतमा भन्दा पनि उच्च प्रदर्शन गरिरहेको र उनीले आफुलाई अझै पनि स्तरीय खेलाडीका रुपमा प्रस्तुत गरेको बताइएका छन् । एभर्टन प्रिमियर लिगको अंक तालिकाको शीर्ष १० भित्र पर्नुमा उनको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको छ ।